Ah, Switzerland, waddan qurux badan oo nabdoon oo si raaxo leh u dhex fadhiya Italy, France, iyo Germany. Waxaa habboon in la booqdo si loo arko sababta Switzerland si joogto ah loogu qiimeeyo inay tahay mid ka mid ah waddamada ugu farxadda badan adduunka. Sidaas maxaad u malayn of marka aad u malaynayso 'Switzerland '? Anigu waxaan male ahayna meelaha barafka lagu xiro, cheese, iyo shukulaatada. Waxaa jiri doona waqti badan oo shukulaatada iyo fondue on your Swiss vacay, laakiin hubi in ka mid ah oo dhan ee dhaqanka, dabiiciga ah, iyo warbixinta kooban ee taariikhiga ah ee dalka this leeyahay in ay bixiyaan. From raacid tareen Tacaddi iyo buurta celin lahayd in naqshadda dhismaha daanka-ka tagtey, Switzerland ayaa wax uu bixiyo nooc kasta oo socotada inta lagu guda jiro xilli kasta. Aynu qaar ka mid ah ayaa waajib-dos dumin waayo, safarka ay Switzerland.
safarka tareenka waa hab la yaab leh in dalkan yar arki. Kiraysiga baabuur, iyo jilaafada waddada noqon kartaa foom la doorbidaa gaadiidka dalal badan, laakiin safraya tareen ee Switzerland waa waayo-aragnimo ah mid taariikhi ah! tareenada waa nadiif ah, waqtiga, iyo safraan qaar ka mid ah ugu muuqaal breathtaking dunida oo dhan. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah wadooyinka tareenka weli si aad u wanaagsan-ilaaliyo,, baabuurta tareen taariikhi ah ka dhigi doonaa in aad dareento sida ay yihiin ee movie duug ah! Qaar ka mid ah wadooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah Jungfraujoch ah, Line GoldenPass ah, oo sitoos Express. Qaar ka mid ah wadooyinka kuwan waxaa ka mid ah la Eurail Pass, iyo qaar ka mid ah aan soo bixin doonaa qiimo dhimis si heysata Eurail Pass. Tareenadu ee Switzerland ma aha had iyo jeer cheap, si a qorshaynta ka hor in yar oo kaa caawin kara inaad badbaadin Francs qaar ka mid ah, haddii aad tahay safraya cross-dalka ama qaadashada a maalinta safarka!
Tani bohol weyn oo uu leeyahay gudubno iyo guriga diyaafadda, gudaha in dhab karo oo ku saabsan 400 dadka oo la kiraystay dhacdooyinka sida casho reerkeyga, xisbiyada, iyo aroosyada. Dhacdooyinka waxaa kasoo muuqan DJ, qoobka, iyo muusikalayda. Waxaad qaadan kartaa tareenka taariikhi ah ka Vitznau si meel gaar ah. Website-yahay oo kaliya in Jarmal, laakiin waad u isticmaali kartaa Google Chrome inaad ka hubiso boggaga internetka ee luuqadaha ajnebiga ah wixii macluumaad dheeri ah ee socdaalka - waad daaran kartaa tarjumaadda otomaatigga ah!
magaalo kasta oo weyn oo uu leeyahay taariikhda ama matxafka sayniska oo laga cabsado magaalada burburay iyo maalmo roobaadka. Si kastaba ha ahaatee, Meelaha qaar ka mid ah dhab ah leeyihiin matxafyada gaar ah in si fudud waa in aan la seegay. Dadka ka yimid adduunka oo dhan si ay u booqdaan H.R ah. Geiger museum ee gubtay.
Fondue waa mid ka mid ah saxamada ugu caansan inay ka soo baxaan Switzerland, oo tanuna waa shil. Dadka ayaa la cunaya cheese dhalaalay ka dheri la wadaago boqolaal sano ee qaybta galbeed Faransiis ku hadla ee Switzerland. Si kastaba ha ahaatee, 1930 Swiss ah Midowga Jiis Colnimo suuq saxan this iyo heer caalamiba, iyadoo loogu dhawaaqayo inay tahay cunnada qaranka Switzerland iyadoo loo marayo qaab lagu iibiyo badnaanta dalka cheese. Oo aynu ku faraxsan nahay waxay camal faleen, kuwaas oo ma jeela cheese dhalaalay iyo kibista? Xubnuhu aad fondue la qalalan ah khamri cad, oo hubi inaadan labalabeyn!
waxa la joogaa wakhtigii loogu talagalay dhabta ah sababta aad u aadeyso Switzerland – shukulaatada! Switzerland waa wax caan ku tahay shukulaatada, waxaadna ka heli kartaa shukulaato badan oo raaxo leh dariiqyada meel kasta oo ay dalka ka joogaan, si kastaba ha ahaatee, Zurich caan ku tahay tours ay shukulaatada badan. Waxaa jira booqasho shukulaato ah si ku habboon miisaaniyad kasta! Waad qaadan kartaa Sabtida aroortii socod socod kaas oo isku daraya waxyaabaha muhiimka ah ee magaalada iyo qaar ka mid ah shukulaatada ugu fiican magaalada. Idin Imtixaamo kiinna qaadashada safar ah oo warshad yar oo shukulaatada, iyo waayo-aragnimo samaynta adiga kuu gaar ah shukulaato. Waayo, hawl xagaaga si dhab raaxo, qaadan shukulaatada ah safar doon si ay u Lindt iyo Sprungli warshad.
Waayahay, hadda in aad iyo shukulaatada iyo cheese buuxiyeen ilaa, waa wakhtigii si ay u helaan mar kale u dhaqaaqin! Buuraha Swiss ma aha kuwa xaqa barafka ee xilliga qaboobaha! Waxaa jira tug xagaaga breathtaking in aad tegi kartaa dhammaan daafaha dalka, laakiin gobolka Jungfrau waa in sare liiska baaldi aad. Jungfraujoch waa meesha ugu sarreysa ee Europe ee 3,454 mitir (~ 11.330 feet) iyo view waa in aan la seegay. Waxa jira waddo tareen oo halkaas kuu qaadi doonta sannadka oo dhan haddii aadan ahayn socod-bixiye weyn, ama aad soo booqato xilliga jiilaalka. Haddii aad tahay kor u tartan hubi qaar ka mid ah wadooyinka, kuwaas oo gobolka. Qaar badan oo ka mid ah waddooyinka ku leeyihiin cuntada iyo sharaabka goobaha wanaagsan jidka, sidaa darteed ha ka welwelin, ma waxaad u baahan doontaa si aad u xoqdo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)